Lisitry ny lohahevitra - Fihirana Katolika Malagasy
Adihevitra momba ny fandalinam-pinoana izay miseho eto amin'ny takelaka
27 ny 05/Aug/2018 08:57
Adihevitra momba ny: Fandalinam-pinoana
53 ny 16/Mar/2019 18:45
Ireo fanontaniana mety hanitikitika anao amin'ny ankapobeny momba ny finoana katolika
217 ny 12/Aug/2021 13:24
Adihevitra momba ny: Ireto ireo valin'ny fanontaniana manitikitika anao. Raha misy fanontaniana hafa dia apetraho ery ambany.
29 ny 29/Sep/2020 08:20
Adihevitra momba ny:
1 ny 24/Mar/2014 06:31
Adihevitra momba ny: Tsy natao hidiram-bola ity takelaka ity fa natao maimaim-poana vokatry ny fitiavana ny Fiangonana sy ny fampielezana ny finoana. Na izany aza nefa dia misy ireo fandaniana atao. Koa raha toa ka manam-paniriana hanampy ara-bola ianao dia raisina an-tanandroa na dia kely aza satria ilaina tokoa. Koa r
1 ny 29/May/2013 06:42
Adihevitra momba ny: Betsaka ireo zavatra ilàna fanampiana hanatontosàna ity takelaka ity sy ny zavatra hafa miaraka aminy ka isaorana anareo mialoha amin'izay azo atao. Hampiditra lahatsoratra Hiara-miasa aminay Hanampy ara-pitaovana Hanampy ara-bola
19 ny 06/Aug/2018 07:08
73 ny 01/Mar/2019 09:26
Adihevitra momba ny: Hira fampiasa amin'ny Litorjia Hampiditra hira
24 ny 11/Apr/2019 10:31
Adihevitra momba ny: Hira vitsivitsy nangonina tetsy sy eroa. Ny sasany dia namboarina ka mety tsy lavorary. Raha toa ka manana hira ihany koa ianao dia afaka mandefa izany amin'ny contact@katolika.org Raha misy hira hafa tianao hangatahina koa dia azonao lazaina ery ambany dia ezahina hatao eo. Mesia sy Mpamonjy
80 ny 24/Aug/2020 12:12
Adihevitra momba ny: Ireo hafatra isanandro alefan'ny Papa
11 ny 14/Aug/2018 05:14
Adihevitra momba ny: Katolika ve ianao? Malagasy na afaka manoratra sy mamaky teny malagasy? Manana fotoana kely? Vonona hanampy antsitra-po ny Katolika.org? Raha eny no valin'ireo fanontaniana ireo dia afaka miara-miasa aminay ianao. Ny azo atao ? Ny ekipan'ny katolika.org dia mitovy aminao koa, namaly ireo fanontanian
2 ny 10/Jun/2013 15:25
Zava-baovao momba ny takelaka. Tsikera sy soso-kevitra.
10 ny 22/Apr/2015 12:36
Mombamomba ny fihirana katolika android
Adihevitra momba ny: Ny Fihirana Katolika amin'ny Android dia natao indrindra hanampy ny Katolika Malagasy amin'ny fivavahana sy fihaonana amin'Andriamanitra. Ny mihira hoy Md. Augustin dia toy ny mivavaka indroa ka inoana fa ho fitaovana hiasa amin'izany fankalazana an'Andriamanitra amin'ny hira izany ity
Adihevitra momba ny: Ireo olo-masina
2 ny 08/Mar/2015 16:17
Adihevitra momba ny: Misaotra anao sahady vonona ny hampiditra hira. Raha toa ka efa nahavita ny dingana vitsivitsy voalaza etsy ambany ianao dia tsindrio avy hatrany ny bokotra: HAMPIDITRA HIRA Mba hahafahana mandrindra ny fampidirana hira dia toa izao ny dingana atao: Ilaina hahafantarana anao ny solonanaran
1 ny 16/Aug/2013 13:30
Adihevitra momba ny: Vaovaom-piangonana
20 ny 10/Nov/2021 14:24
Adihevitra momba ny: Vatsim-panahy
32 ny 03/Mar/2020 10:49
Adihevitra momba ny: Vavaka
41 ny 08/Mar/2020 15:59